Home FAMPIASANA CLASSIC Ricardo Kaka tantaran'ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa
Ny LB dia manolotra ny tantara feno momba ny legiona baolina kitra malaza amin'ny anarana; "Kaka". Ny tantaran-tantaran'i Ricardo Kaka momba ny tantaran'ny tantaram-pianakaviana sy ny tantaram-piainan'ny tsy fantatra anarana dia mitondra ny fitantarana feno momba ireo zava-nitranga mahatalanjona hatramin'ny fahazazany hatramin'izao. Ny famakafakana dia ahitana ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fifandraisany amin'ny fiainana, ny fiainam-pianakaviana ary ny ankamaroan'ny zavatra tsy fantatra momba azy.
Eny, fantatry ny rehetra momba ny fahaiza-manaony fa vitsy no mieritreritra ny tantaran'i Ricardo Kaka izay tena mahaliana. Amin'izao fotoana izao, raha tsy misy adieu, dia aoka isika hanomboka.
Ricardo Kaka Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Voalohandohan'ny fiainana
Ricardo Izecson dos Santos Leite AKA 'Kaka' dia teraka tamin'ny andro 22nd of April 1982 tany Brasília, Distrika Federalin'i Brezila.
Teraka tamin'ny reniny, Simone dos Santos (mpampianatra sekoly ambaratonga voalohany teo aloha) sy Bosco Izecson Pereira Leite (injeniera sivily misotro ronono).
Nahazo fanabeazana ara-bola izy izay nahafahany nifantoka tamin'ny fianarana sy ny baolina kitra niaraka tamin'io fotoana io. Rehefa fito taona izy, nifindra monina ny fianakavian'i Kaká São Paulo.
Tahaka ny maro talohany, i Kaka dia nahita lalao iray tiany tamin'ny baolina kitra. Ny sekoliny dia nahita ny talentany ary nametraka azy tao amin'ny klioban'ny tanora tao an-toerana "Alphaville,".
Nataon'i Kaka ny kliobany ho an'ny farany amin'ny fifaninanana eo an-toerana. Izany no nahatonga azy ho lasa mpilalao baolina kitra hometown São Paulo FC, izay nanolotra azy toerana iray tao amin'ny akademian'ny tanora. Ny ambiny, araka ny filazany, ankehitriny dia tantara.
Ricardo Kaka Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Relationship Life
Kaka dia niarahaba an'i Caroline amam-pitiavany tamin'izy zatovo fony izy 15 ary izy no 20 tamin'io fotoana io.
Izany dia nitranga tao amin'ny 2002, raha mbola tany an-tsekoly izy Brezila. Lasa nifankatia izy ireo. Na lavitra aza (tao amin'ny an'arivony kilaometatra) dia tsy afaka nanasaraka azy ireo. Samy nanomboka ny fifandraisany tamim-pirahalahiana izy ireo tamin'ny fotoana iray nilaozan'ny Kaká hilalao AC Mailand. Raha mbola teo izy, dia niditra tao amin'ny fiangonana Kaka i Celico Brezila ary lasa pasitera taty aoriana, noho ny finoany kristianina rehetra.
Tena tsara tarehy i Caroline, mpino ary mpivavaka be. Kaka dia nilaza fa virjina izy roa lahy talohan'ny nanolorany azy.
Izy ireo dia nanambady tamin'ny 23rd tamin'ny Desambra 2005 tao amin'ny fiangonana Rebirth ao amin'ny fiangonana an'i Kristy ao São Paulo.
Ny roa dia manan-janaka roa: ny zanany lahy Luca Celico Leite (teraka 10 June 2008) ary zanakavavin'i Isabella (teraka 23 April 2011). Samy manakaiky ny rainy izy ireo, araka ny hita etsy ambany.
Kaka sy ny zanany
Ricardo Kaka Childhood Story Plus Untold Biography Facts -The Divorce Story
Ao amin'ny 2015, Kaká sy Celico nanambara ny fisaraham-panambadiana tamin'ny alalan'ny media sosialy. Amin'ny teniny ..."Te hampahafantatra izahay fa efa sivy taona izahay no nanaiky ny fisaraham-panambadiana. Ny fanambadianay dia nanome zanaka roa tsara tarehy izay tianay tokoa. Amin'ny lafiny manan-danja fifandraisana, hanohy hanana izany isika, ny fifanajana, ny fankasitrahana ary ny fifankatiavana ho an'ny tsirairay dia tsy miova. Mangataka ny fangorahanao sy ny fahatakaranao izahay mba hitazona ny tsiambaratelonao amin'ny fotoana fiovana. "
Nanambara koa i Celico vadiny taloha ... "Raha misy olona mifamaly, dia famantarana fa tsy nahomby ny vadiny." Ny teniny dia nanome baiko ny mpankafy an'i Kaka ny antony nahatonga ny fisaraham-panambadiana sy ny antony nisarahan'izy ireo.
Ny fiheveran'i Caroline ny fisaraham-panambadiany
Tamin'ny 24 December 2016, nanamafy i Kaka fa izy dia mampiaraka ny modely Breziliana Carolina Dias amin'ny hafatra ho an'ireo mpanaraka azy 9.8million ao amin'ny Instagram.
Porofo fa nihetsiketsika i Kaka
Nanatrika ny fampakaram-badin'i Lucas Moura tao Sao Paulo ny mpivady.
Ary tamin'ny farany 2016 taorian'ny volana maromaro niampangàna, dia nanamafy tamin'ny fomba ofisialy i Caroline Celico fa eo amin'ny fifandraisany amin'ny mpandraharaha Breziliana Eduardo Scarpa. Faly i Kaka rehefa nahita ny sarin'ny vadiny taloha sy ny fahavalo iray nomeny. Mahatsiaro tena tsara ny fitiavany vaovao i Eduardo.
Porofo fa nihetsiketsika i Caroline Celico
Ricardo Kaka Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Fiainana ao amin'ny fianakaviana
RAY: Ny rain'i Kaka, Bosco Izecson Pereira Leite dia injeniera sivily misotro ronono amin'ny fianakaviana antonony. Nataony fa ny zanany roa (Kaka sy Digão) dia nahazo fanabeazana mety. Tsy lavitry ny fahantrana izy ireo. Nomeny azy ireo ny fanabeazana mety sy ny fahafahana hisafidy sy hiaina ny nofinofiny. Ity ambany ity ny Bosco Izecson Pereira Leite sy ny zanany lahy voalohany, Little Kaka.
Bosco Izecson Pereira Leite sy Kaka kely
rENY: Kaman's mum; Simone dos Santos dia mpampianatra sekoly ambaratonga voalohany misotro ronono izay nanangana fifandraisana tsara teo aminy, Kaka ary ny sisa amin'ny fianakaviany. Ny maha mpampianatra sekoly ambaratonga fototra azy dia nahatonga azy hahazo fahatakarana tsara kokoa momba ny dinam-pianakaviany. Simone dos Santos dia ao ambadiky ny toetran'i Kaka mankany amin'Andriamanitra. Samy nifanakaiky be izy ireo, araka ny hita eo amin'ny sary etsy ambany.
Kaka sy Mum-Simone dos Santos
rahalahiny avy; Rodrigo Manuel Izecson dos Santos Leite (teraka 14 October 1985), fantatra amin'ny anarana hoe Digão, dia Breziliana mpilalao baolina kitra misotro ronono ary ny hany rahalahin'i Kaka. Izy no mpilalao fototra nandritra ny andro niasany.
As Tatitra Bleachers dia mametraka izany, Digão dia anisan'ireo lisitry ny mpilalao baolina kitra manerantany izay tsy nanao an'izany. Digão no nilalao AC Milan ho herintaona mialoha ny hiverenany any amin'ny kaontinanta amerikana hanohy ny asany izay tsy nahomby.
Hatramin'ny daty, heverina ho ilay mpilalao marefo indrindra izy amin'ny fametrahana ny tongony amin'ny seranana A Serie A. Ny mpankafy sasany dia milaza fa izy no mifanohitra mivantana (antonym) Kaka amin'ny fomba rehetra azo atao. Somary naneso ihany, Digão ihany no nilalao ny lalao 38 tao anatin'ny sehatra rehetra niasany nefa tsy nahitana tanjona iray. Nisotro ronono izy raha vao nahita an'i 32 nahita ny baolina dia tsy miantso azy.
Ny fahaverezan'ny asa aman-draharahany dia nahazo tombontsoa tamin'ny fitiavany. Sambatra am-panambadiana amin'ny mpahay maritrano Rebeca Sabino izy. Kaká no andriamanitry ny fampakaram-bady.
Ricardo Kaka Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Ny loza mitatao
Tamin'ny taona 18, Kaká dia nijaly noho ny fandrahonana matihanina sy mety ho lolom-po-niteraka herisetra eo amin'ny tsipika vokatry ny lozam-piaramanidina.
Soa ihany fa nahomby izy. Manasongadina ny fiverenany amin'Andriamanitra izy ary nanomboka tamin'ny ampahafolony tamin'ny fidirany tao amin'ny fiangonany.
Ricardo Kaka Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Ny anaran'ny anarana
Rodrigo (malaza antsoina hoe Digão) zandriny lahy sy havany Eduardo Delani dia mpilalao baolina matihanina ihany koa.
Digao niantso azy "Caca" noho ny tsy fahaizany miteny "Ricardo" raha mbola tanora izy ireo. Ny tsy fisian'ny fanononana dia nipoitra tamin'ny anarana 'Kaka '. Ny anarana 'Kaka' tsy misy dikanteny portogey manokana.
Ity ambany ity ny sarin'i Kaka sy ny zandriny lahy fony izy ankizy.
Kaka sy Digão
Ricardo Kaka Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Ny Finoany
Kaká dia evanjelika mpivavaka be, izay mpikambana mavitrika ao amin'ny Rebirth ao amin'ny Fiangonana Kristiana ao São Paulo.
Nanjary liana tamin'ny fivavahana izy tamin'ny taona 12: "Nianarako fa finoana no manapa-kevitra raha hisy zavatra hitranga na tsia." hoy i Kaka.
Fantany matetika fa nesoriny ny fanamiany mba hanambarana azy "Izaho dia an'i Jesosy T-shirt. Kaka dia nirotsaka an-tsehatra ihany koa tamin'ny fotoam-bavaka taorinan'ny farany. Izany no nataony taorian'ny Mondialy 2002 Breziliana, Milan ny 2004 Scudetto ary nandresy ny Champions League 2007.
Nandritra ny fankalazana ny lalao manaraka ny fandresen'i 4-1 an'i Brezila nandritry ny fandresen'i Arzantina tao amin'ny 2005 Confederations Cup Farany, izy sy ireo mpiara-miasa aminy marobe no nanao T-shirts izay mamaky "Jesosy tia anao" amin'ny fiteny samihafa.
Raha nahazo ny loka FIFA World Football an'ny taona tao amin'ny 2007 izy, dia nilaza izy fony tanora izy fa te-ho mpilalao matihanina ho an'i São Paulo ary milalao lalao iray ho an'ny Brezila ekipam-pirenena, saingy izany "Andriamanitra dia nanome mihoatra noho izay nangatahiny."
Hatramin'ny daty, ny lokan'ny ankafizin'ny Kaká dia ny filazantsara ary ny boky ankafiziny dia mitoetra ihany koa ny Baiboly. Ao amin'ny tafatafa amin'ny Breziliana fahitalavitra O Globo, I Kaka dia naneho ny sitrapony ho lasa pasitera evanjelika taorian'ny fisotroan-dronono.
Ricardo Kaka Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Inona no tsaroany?
Satria mandalo ny fiarovany fiarovany.
Ho an'ireo naratra dia nijaly tao amin'ny Real Madrid izy.
Ho an'ny haingam-pahefana, matanjaka, mandaitra ary miasa mafy.
Satria ho mpilalao matihanina mamoron-kira miaraka amin'ny paingotra, tongotra tsara, ary fandanjana tsara.
Ho an'ny fahaizany manosika ny mpiaro ny lasa.
Noho ny maha-mpitarika ny mpanohitra azy ary mamorona lanjany.
Satria sazy marina.
Satria miditra lalao mpilalao midadasika midadasika izy.
Hamarino ny marina
Miezaka izahay mba hahatontosa ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mijery ity lahatsoratra ity ianao dia mametra ny fanamarihanao na Mifandraisa aminay!
Andre Silva Tantara Momba Ny Tantaram-pahagagana Nataon'Andriamatoa Zava-bita
Carlos Bacca Tantaram-pahaizana momba ny tantaram-pianakaviana malaza tsy fantatra
Stephan El Shaarawy tantaran'ny tantaram-pahaterahana an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
Kevin-Prince Boateng tantara an-tsary momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa